Indonesia njem nleta paradise Bali na-aga n'ime oké mberede mkpọchi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Indonesia » Indonesia njem nleta paradise Bali na-aga n'ime oké mberede mkpọchi
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Indonesia • News • Resorts • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ugbu a Indonesia na-eche otu n'ime nsogbu ọrịa coronavirus kacha njọ na Asia, na-agụta ihe karịrị ikpe 20,000 kwa ụbọchị na izu ndị na-adịbeghị anya.
Onye isi ala Joko Widodo kwupụtara mkpọchi ọhụrụ na mbido Fraịde, nke ga-adịgide ruo ngwụsị July, agbanyeghị na enwere ike ịgbatị ya.
A na-atụ anya na njikọta njikọta iji hụ na mkpọchi ga-aga nke ọma ma zute ebumnuche ahụ.
Ndị agha a jikọrọ aka nwere ndị uwe ojii 21,000 na ndị soja 32,000.
Dabere na onye isi ndị uwe ojii, gọọmentị nke Indonesia na-ebunye ndị ọrụ 53,000 maka mgbochi mmachi ọrụ obodo (nke a maara dị ka PPKM) nke etinyere na Java na Bali site na July 3 ruo 20.
Onye isi nyocha bụ Imam Sugianto kwuru na ndị otu jikọtara ọnụ bụ ndị uwe ojii 21,000 na ndị agha 32,000.
A na-atụ anya na njikọta njikọta iji hụ na PPKM mberede ahụ ga-agba ọsọ nke ọma ma zute ihe ahụ, Sugianto kwukwara.
E guzobewo ọtụtụ narị okporo ụzọ na ebe a na-enyocha ihe na Indonesia dị ka ndị ọchịchị na-anwa ime ka mkpọchi mkpọchi siri ike iji gbochie mgbasa nke COVID-19, nke toro na mba ahụ na izu ndị na-adịbeghị anya.
Mbugharị ahụ na-abịa ngwa ngwa mgbe Onye isi ala Joko Widodo kwupụtara mkpọchi ọhụrụ na mbido Fraịde, setịpụrụ ka ọ ga-adịgide na ngwụsị July, agbanyeghị na enwere ike ịgbatị ya. Iwu ahụ chọrọ ka azụmahịa niile "na-enweghị isi" mechie ọnụ ụzọ ha, ebe ụmụ akwụkwọ Java na Bali ga-amụta n'ụlọ site na ọ ga-ekwe omume. Emechibidoro ogige, ogige, ụlọ nri n'ime ụlọ na ebe ofufe, tinyere ebe ọha na eze.
Indonesia ugbu a na-eche otu n'ime nsogbu ọrịa coronavirus kasị njọ na Asia, na-agbakọ ihe karịrị 20,000 ikpe kwa ụbọchị na izu ndị na - adịbeghị anya - ọtụtụ kwenyere na njikọ jikọrọ Delta dị iche iche nke mbụ hụrụ na India - na ọ bụ naanị maka ndị nyocha site na nyocha. Obodo ahụ agbajila ndekọ ọrịa ọ bụla kwa ụbọchị maka ụbọchị 12 gara aga, dị ka Reuters si kwuo, na-akọ akụkọ 25,830 na Fraịde, yana ọnụọgụ dị elu nke 539.
Nyere BaliMgbalị ndị a na-agba mgbochi na-elekwasị anya n'àgwàetiti ahụ, ebe ihe dị ka 71% nke ndị bi na ọgwụ mgbochi ahụ ugbu a. N'etiti ọgba aghara na nso nso a - na-ahụ ihe dịka 200 kwa ụbọchị - agwaetiti ahụ ka na-emechi maka njem nlegharị anya nke mba ụwa, gụnyere maka ndị nlegharị anya na-egbochi ọgwụ mgbochi, na-enye naanị ndị Indonesia na ndị nwere ikike pụrụ iche ịga ebe ahụ. Ndị bi na ya nwere ihe dị ka nde 4.3.